ကျွန်ုပ်တို့ စာတည်းအဖွဲ့ မှ လက်ရှိဆိုဒ်တွင် တိုးချဲ့ ထည့်သွင်းမည့် အစီစဥ်သစ်များကို ၀မ်းမြောက်စွာ ကြေညာလိုပါသည်။ International Development Research Center (IDRC) ၏ ရက်‌ရောမှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုများကြောင့် အစီစဥ်သစ်များ တိုးချဲ့ ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အချို့ အစီစဥ်သစ်များကို အနည်းဆုံး အောက်တိုဘာလအထိ ပုံမှန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး အချို့ အစီစဥ်သစ်များကို ယာယီ စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ စာတည်းအဖွဲ့ အနေဖြင့်အဆိုပါ အစီစဥ်သစ်များအားလုံးကို ရေရှည်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေပါသည်။
လက်ဖက်ရည်၀ိုင်း ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့ ဆိုဒ်တွင် မျှ‌ဝေခဲ့ကြသည့် ဆောင်းပါးရှင်ပေါင်းရာ ကျော်ကို အကူညီပေးရန် မြန်မာနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ မှ ဘာသာ ရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များနှင့် လက်တွေ့အသုံးချနေသူများက
စေတနာ့၀န်ထမ်းအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ စာတည်းအဖွဲ့ တွင် လုပ်ကိုင်အချိန်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ဖက်ရည်၀ိုင်းကို ဆက်လက် ကြီးထွားရန်၊ ဖော်ပြသည့် အကြောင်းရာများ ပိုမိုကောင်းမွန်ရန် မိမိတို့ကျွမ်းကျင်ရာဘက်မှ စဥ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းကူညီခဲ့ကြသည့် စေတနာ့၀န်ထမ်း စာတည်းမှုး ၁၂ ဦးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာတည်းဖော်ပြထုတ်‌ဝေမှုများကို မြန်မာပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ ခြေလှမ်းတိုးချဲ့ ရန်မှာ အမြဲတမ်း ရှိခဲ့သော ရည်ရွယ်ချက်တခု ဖြစ်ပါသည်။ လက်ဖက်ရည်၀ိုင်းကို ဆက်လက်ကြီးထွားစေလိုသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်များသည် စေတနာ့၀န်ထမ်း စာတည်းမှုးများအား ကျိုးကြောင်းမဆီလျော်သည့် ၀န်ထုတ်၀န်ပိုး တခုမပေးလိုသည့်အတွက် တွန့်ဆုတ်ခဲ့ ရသည်။
ယခုကဲ့သို့ ရန်ပုံငွေရရှိခြင်းက အဆိုပါအ‌ခြေနေကို အပြောင်းလဲဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာအတွက် စာတည်းဖြတ်မှုလုပ်ငန်းစဥ်သည် စေတနာ့၀န်ထမ်းများ၏ ကူညီမှုပေါ်မူတည်နေဦးမည် ဖြစ်သော်လည်း နောင်ဖော်ပြမည့် အကြောင်းရာ အသစ်များ၊ ပူး‌ပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ‌‌ခြေလှမ်းသစ်များအတွက် လိုအပ်မည့် နေရာရာထူး အနဲငယ်အတွက် ရန်ပုံငွေထားနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လက်ဖက်ရည်၀ိုင်း၏ စာမူလက်ခံခြင်း၊ စာတည်းဖြတ်ခြင်း နှင့် ဖော်ပြ ထုတ်‌‌ဝေခြင်း လုပ်ငန်းများကို အများဆုံးစီမံခန့်ခွဲနေသည့် စာတည်းမှုး ၁၇ ဦးအပြင် နေရာအသစ် ၇ နေရာအတွက် ဖွဲ့ စည်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အစီစဥ်သစ်များကို အရေးကြီးဆုံးနေရာ လေးခုတွင် တိုးချဲ့ ထည့်သွင်း ထားပါသည် ။
အထူးဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ပူး‌ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ။ ။ လက်ဖက်ရည်၀ိုင်းတွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော ပို့စ်များ ကို ပုံဖော်မည့် (webinars များကဲ့သို့) အထူးဆွေးနွေးပွဲများကို အတွဲစဥ်လိုက် စီစဥ်ကျင်းပသွားရန် ရှိပါသည်။ ထို အထူးဆွေး‌နွေးပွဲများအား ကျွန်ုပ်တို့ ဆိုဒ်မှ တင်ပြခဲ့သော ဆွေး‌နွေးချက်များကို ဖြန့်ကျက်နိုင်မည့်၊ ‌ရှေ့ နှစ်များစွာ ကတည်းမှ စာရေးသားခြင်းပုံစံဖြင့် တည်ရှိခဲ့သည့် ကွဲပြားစုံလင်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို တည်ဆောက် နိုင်မည့် အခွင့်လမ်းများအနေဖြင့် ရည်မှန်းထားပါသည်။
လူသစ်များဖိတ်ခေါ်ခြင်း နှင့် လိုအပ်ချက်အလိုက် သင်ကြားပေးခြင်း ။ ။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာအခြေစိုက် အဖွဲ့စည်းများနှင့် ပညာရေးအဖွဲ့စည်းများကို စတင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ တရား၀င် မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်မှုများ နှင့် အလွတ်သ‌ဘော စာရေးသားခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးမှုများမှ ထွက်ပေါ် လာသည့် ဆောင်းပါးများစွာအား တည်းဖြတ်ထုတ်‌ဝေလျှက်ရှိသကဲ့သို့ ယခုဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ ဆိုဒ်တွင် စာမူ ပေးပို့လိုသည့် ဆောင်းပါးရှင်အသစ်များကို ကူညီပံ့ပိုးရန် စိတ်အားထက်သန်သည့် ဆရာများစွာလည်း ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ထို ဆရာများက လက်ဖက်ရည်၀ိုင်းတွင် ရေးသားမှုများ၊ ဖတ်ရှုပြင်ဆင်မှုများ၊ စာတည်းဖြတ်မှု လုပ်ငန်းစဥ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ လမ်းညွှန်မှုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပံ့ပိုးမှုသည် မြန်မာနှင့်အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာလုံးအတွက် ရနိုင်ပြီး ရေသားမျှ‌‌ဝေလိုသည့် ကနဦး စိတ်ကူးစိတ်သန်းများရှိသူ မည်သူမဆို အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော အီးမေးလ် လိပ်စာမှ တဆင့် စာတည်းအဖွဲ့ သို့ ဆက်သွယ်ရန် တိုက်တွန်းပါသည်။
ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း။ ။ မကြာသေးမီက တွစ်တာ နှင့် ဖေ့စ်ဘုတ်ခ် လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာများမှ တဆင့် ကြေညာခဲ့ သကဲ့သို့ ပုံမှန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်မျှ‌ဝေသည့်‌ ဆောင်းပါးအချို့ ကိုရွေးချယ်ကာ မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြန်ဆို ဖော်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဇူလိုင်လသည် ကျွန်ုပ်တို့ ဆိုဒ်အတွက် ဘာသာစကားနှစ်ခုဖြင့် စတင် ထုတ်ဝေ တင်ပြမည့်လဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာ နှင့် မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ် ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုမှုများ ပိုမိုထုတ်‌‌‌ဝေလာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖတ်ရှုသူ ပရိတ်သတ် များအတွက် မြန်မာဘာသာြဖင့် ရေးသားထားသော ဆောင်းပါးများကို လက်ခံမည့်၊ စာတည်း ဖြတ်မည့်အထူး ဖိုရမ်တွင်လည်း မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုမှု ပါ၀င်ပါမည်။ လာမည့်လများသည်စမ်းသပ်ထုတ်‌ ဝေ တင်ပြမည့် အဆင့်ဖြစ်သော်လည်း တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများ အပါအ၀င် အခြားဘာသာ စကားများ နှင့်အတူ မြန်မာနှင့်အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာကို ကောင်းမွန်စွာ အပြည့်၀ဖော်ပြ ထုတ်‌ဝေနိုင်သည်အထိ တိုးချဲ့ သွားရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
ဝဘ်ဆိုဒ် ဒီဇိုင်း ပြန်လည်ရေးဆွဲခြင်း ။ ။ ဘာသာစကားအစုံနှင့် ဖော်ပြလိုသော ကျွန်ုပ်တို့၏အလေးထား မှုနှင့် အညီ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ်းလှမ်းမှုအသစ်များကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ထည့်သွင်းရန်နှင့် နှစ်ဘာသာဖြင့်ဖော်ပြ သည့် ဆောင်းပါးများနှင့် အထူးအတွဲစဥ်များကြားတွင် ချောမောစွာကူးလူးဖတ်ရှုနိုင်ရန် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲ ထား သည့် ၀ဘ်ဆိုဒ်တခုကို လာမည့် လများတွင် လွှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ယခုကြိုးစားမှု၏ အသီးအပွင့်များကို လာမည့်လများတွင် စာဖတ်သူများနှင့် မျှ‌‌ဝေရမည့်အတွက် အထူး ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ ဆောင်းပါးစာမူများပို့ခဲ့သည့် စာဖတ် ပရိတ်သတ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပို့စ်များတွင် အပြန်အလှန် ဆွေး‌နွေးမျှ‌ဝေခဲ့သည့် စာဖတ်ပရိသတ်များ၊ လွန်ခဲ့သည့် ၆ နှစ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုဒ်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာရန် အကြံပြုချက်များပေးခဲ့သည့် စာဖတ်ပရိသတ်များ စသဖြင့် အစဥ်တစိုက်ဖတ်ရှုခဲ့သည့် စာဖတ်ပရိသတ်များစွာကို
အရေးကြီးသည့်အပြန်အလှန်ဆွေး‌နွေးမှု ဒိုင်ယာ‌လော့များ နှင့် အပြန်အလှန်မျှ‌‌ဝေမှုများ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာလုပ်ဆောင်လိုသည့် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဖေဖော်၀ါရီလ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တပ်မတော်အာဏာသိမ်းခြင်းအပြီးတွင် ပိုမို အရေးတကြီးဖြစ် လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဆိုဒ်တွင် ရေးသားမျှ‌ဝေမည့်သူများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးမှာ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်အပူဆုံး ဖြစ်ပြီး အမည်မဖော်ပြဘဲမျှ‌‌ဝေနိုင်ရန်နှင့် လုံခြုံသည့်စာမူပေးပို့ရန် လမ်းကြောင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ထပ်မံဖြည့်သွင်းထားသောမူများ တွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။
ယခုလို အစီစဥ်သစ်များ တိုးချဲ့ ခြင်းက လက်ဖက်ရည်၀ိုင်း တည်ထောင်ရခြင်း၏ဦးတည်ချက် ကို ပြည့်၀စေရန် စွမ်းဆောင် မည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်သွေးများကို တိုးတက်စေမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ပညာရှင်နယ်ပယ်၊ တိုက်တွန်း အဆိုပြုမှု နယ်ပယ် သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုသော မည့်သည်နယ်ပယ်တွင်မဆို ကျွန်ုပ်တို့တဦးချင်း၏ စိတ်၀င်စားလေ့လာမှုများသည် ရည်ရွယ်ချက်တူ စိတ်တူကိုယ်တူ အဖော်များရှိသည့်အ၀န်းအ၀ိုင်းတခုတွင် ပါ၀င်ကာ အပြန်လှန် ဆွေး‌နွေးခြင်း၊ မျှ‌ဝေခြင်း များဖြင့်သာ တိုးတက်လာခဲ့သည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအကူးပြောင်းကို ယခုစတင်နေပြီဖြစ်၍ သင်၏ မှတ်ချက်များ၊ အကြံပြုချက်များနှင့် မျှ‌ဝေလိုသည့်အကြောင်းရာများကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုဆိုပါသည်။
This post is translated by Tea Circle’s Translation Team. Read the English version of our post here.
Posted in Announcement, translationTagged burma, expansion, myanmar, tea circle